महामारीविरुद्ध लड्न कुन देशले के–के सहयोग दिए ? - NepaliEkta
महामारीविरुद्ध लड्न कुन देशले के–के सहयोग दिए ?
काठमाडौं । कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको लागि गरेको अपीलको नतिजा देखिन थालेको छ । केही मुलुकले स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाइसकेका छन् भने केही मुलुकहरु पठाउने तयारीमा छन् ।
ओमानमा रहेका नेपालीको सहयोग
ओमानमा रहेका एनआरएनए र अन्य नेपालीले संयुक्त रूपमा खरीद गरेर ५६० अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाएका छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीको यतिबेला सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।
थाइल्याण्डका विभिन्न संस्थाको सहयोग
थाइल्याण्डमा रहेका विभिन्न संघ–संस्थाले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन् । त्यहाँबाट २४ अक्सिजन कन्सट्रेटर र अन्य स्वास्थ्य सहयोग सामग्री आएको छ ।
स्पेनले बिहीबार एक चार्टर्ड विमानद्वारा स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ । स्पेनले सो सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्पेनले पठाएका सामग्रीमा ५० सिलिन्डर, २० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, ७७ भेन्टिलेटर लगायत अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री रहेका छन् ।
फिनल्याण्डले २२ लाख सर्जिकल फेस मास्क, ३५०० एफएमपीटु मास्क, ५२ हजार ५०० ग्लोभ्स र ३० वटा आइसोलेसन गाउन्स नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ ।
फ्रान्सले १४ वटा रेस्पिरेटर्स, अक्सिजन प्लान्टका पाटपुर्जा, २० हजार एन्टिजेन टेस्ट किट र ५०० वटा केएन–९५ मास्क उपलब्ध गराएको छ ।
जर्मनीले ६२ वटा भेन्टिलेटर, २७ हजार एफएफपीटी मास्क, सर्जिकल मास्क, २०० बढी ब्याग र आइसोलेसन सेन्टरका लागि पालहरू उपलब्ध गराएको छ ।
बेलायतले नेपाल पुलिस अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना कार्यमा सहयोग गरेको छ । प्लान्टले प्रतिदिन १६० सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्छ । बेलायत लगायत अन्य मुलुकले पनि सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीका सम्बन्धमा नेपाल र बेलायत बीचमा कुराकानी भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीका साथै सरकारले खोपका लागि समेत विभिन्न मुलुकलाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकले खोप उपलब्ध गराउने घोषणा भने गरेका छैनन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासले सहयोग जुटाउनको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भनी तीव्र आलोचना भइरहेको छ । विशेषतः ठूला मुलुकमा पठाइएका हेभिवेट राजदूतहरूको भूमिकाप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन ।
← अपराह्न ५ बजेसम्म बन्ला नयाँ सरकार ?
अहिले ओलीलाई काँधमा बोक्नेहरुको अवस्था पूर्वपञ्चको जस्तो हुने छ : सिंह →